ooVimba beXAGUSD-Funda ukuRhweba
I-XAGUSD yonyusa iinzuzo ezivela kwiiVeki zeVeki, ukuqhubela phambili ngokuqhubekayo
Ukuhlaziywa: 16 May 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-ngoMeyi 16
Ekupheleni kweseshoni yangaphambili, isinyithi esimhlophe sajika sashiya i-lows ye- $ 26.72 ngeveki kwaye yadutyulwa yaya kwiintsuku ezimbini eziphakamileyo, ejikeleze inqanaba lama- $ 27.48. Umkhwa weXAGUSD Kubonakala ngathi ixutywe ngenxa yabathengi, nto leyo ethetha ukuba inkqubela phambili inokwenzeka. Ukulandela iziphumo ezimbi kakhulu kunokuba bekulindelwe, idola yawa ngolwe-Sihlanu
Amanqanaba okumelana nawo: $ 30.13, $ 28.90, $ 27.92
Amanqanaba enkxaso: $ 26.72, $ 25.50, $ 24.50
Ngokomxholo wobuchwephesha, i-XAGUSD ibisoloko ihamba phambili ngokunyuka okuphakathi kokuhamba (MA 13) ukusuka ku-Epreli 13 ukuya kwinqanaba le- $ 25.00. Ukutsalwa kwakutshanje kwe- $ 30.13 ephezulu yonyaka kugxunyekwe kufutshane nomgaqo wokunyuka. Indawo ephantsi ejikeleze ukunyuka kwemihla ngemihla kwi- $ 23.78 inokubonelela ngenkxaso kwangoko kwimeko yokwehla okungalindelekanga.
Nakuphi na ukunyuka okunyukayo okuvela kumanqanaba akhoyo kunokujamelana nenkcaso eyoyikekayo kufutshane kwinqanaba elithe tyaba kwangoko kwi- $ 27.50. Ukophula okusebenzayo ngaphaya kwamanqaku ayi- $ 28.00 kuya kuqhuba i-XAGUSD idlule umjelo wesitayile esiphakamileyo kufutshane nendawo yokubonelela nge- $ 28.32, ucinezela iincopho zangaphambili. Isinyathelo esinyanisekileyo esiya kwiindawo eziphakamileyo zangoFebruwari 1 zinokwenzeka ukuba siphula ngaphezulu kwe- $ 27.50 yamanqaku.
Isilivere ibonakala ngathi iphehlelela umqobo obalulekileyo kubuchwephesha kwi-27.50 yamanqaku, njengoko kubonisiwe kwitshathi yeeyure ezi-4. Ukuba isithintelo sibambe, iXAGUSD inokuthi ifumane inkxaso kufutshane nenqanaba leedola ezingama-26.72 kubulelwe kwi-4 yeyure ehambayo ye-13 ebonakala ngathi iyimbuyekezo yokwandisa inzuzo ngokuchasene neDola yaseMelika kwixesha elifutshane.
Uluhlu oluphezulu phakathi kwe- $ 28.00 kunye ne- $ 30.00 inokuba yinto ekujolise kuyo; Okwangoku, iibhere akunakulindeleka ukuba ziphumelele kwintengiso. Ikhefu elizinzileyo apha ngezantsi, kwelinye icala, linokubonwa njengeempawu zokuqala zokudinwa, ukubeka isibini emngciphekweni wokuvavanya indawo eyi- $ 25.00.
Ixabiso lesilivere: I-XAGUSD Bulls inamehlo ngakuMda ophakathi kwe- $ 28.00 yeNgingqi kwiDola yaseMelika
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-ngoMeyi 9
Isilivere (i-XAG) inyukele kwiinyanga ezimbini eziphakamileyo zeedola ezingama-27.67 ukuvala i- $ 27.45 ngolwesiHlanu, ifumana phantse iipesenti ezingama-20 ngeveki. Njengoko iXAGUSD inyukela phezulu, abathengi banamehlo ngakwiphakathi yeedola ezingama-28. Ukuphoxeka okukhulu kumxholo ophambili wenombolo ye-NFP kunokuchaza iSilver ngasekupheleni kweveki engaphambili kwidola ethambileyo.
Amanqanaba enkxaso: $ 27.00, $ 26.00, $ 25.00
Izinyithi ezimhlophe ezihamba phakathi kwe-5 kunye ne-13 ziphantse zanomfuziselo we-bullish, kodwa imeko ayithethi kuthi ixabiso lentengo. Isilivere ngoku ivula ukusuka kwi-0.53 yepesenti ephezulu ngosuku nge-27.45 yeedola, kwaye isinyithi esimhlophe esimalunga nesikhombisi samandla (RSI) siphantse safikelela kwimigca engama-70, kodwa imigca engama-70 ayithethi ukuba ingingqi ethengwe ngaphezulu kodwa sisiqalo.
Ukuqinisekisa ukujikwa kwe-bullish, i-XAGUSD kufuneka iwele ngaphantsi kwe-27.67 yeedola. Kwiibhere, inqanaba leedola ezingama-26.65 lelinye lokubetha. Ukusukela ekuqaleni kuka-Epreli, elo nqanaba liye lasebenza njengesilingi eqinileyo kubathengi ngamanye amaxesha. Logama nje amaxabiso ehlala ngaphakathi kwiveki ephelileyo yokuthengisa ephezulu kwe- $ 26.65 ukuya kwi- $ 27.67, i-bias yokuqala ingahlala ingathathi cala.
I-XAGUSD yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isilivere yamachaphaza ifumana amandla angaphezulu kwicala lokujonga. Emva kokophula ngaphezulu kwe- $ 27.00 yamanqaku kwaye iyonke ngaphezulu kwenkxaso yexesha elifutshane le-MA 5, i-XAGUSD ibambe kakuhle. Umyinge we-13 wokuhamba ushukunyiswe phezulu.
Inqanaba lenkxaso elikufutshane yi- $ 27.00, ngelixa amanqanaba okuqala kunye nawesibini anyanzeliswa ukuya kuthi ga kwi-27.92 kunye ne- $ 28.90 ngokwahlukeneyo. Kwelinye icala, amandla athile aphezulu kwintengiso kunokwenzeka ukuba aqhubeke kwiseshoni elandelayo yorhwebo.
Iirali zesilivere ngexesha lokubhalwa kwaye zime kwinqanaba le-25.449. Ixabiso likhuphe imiqobo kwangoko ebonisa abathengi abomeleleyo.
Ixabiso liphuhlise isaphulelo sexesha elifutshane emva kokuthengisa okukhulu. Umoya okhoyo ngoku wobungozi olawula iimarike unokuthumela iSilver ephezulu kwixesha elifutshane.
Uhlalutyo lwetshathi lwe-XAG / USD H1!
I-XAG / i-USD yatsiba ngaphezulu komgca we-downtrend kwaye ibhalise ukuqhekeka okusebenzayo ngaphezulu kwenqanaba lokubuyiselwa kwe-50%. Ngoku kukucinezela inqanaba leveki le-R1 (25.447).
Ukuvala ngaphezulu kwayo nangaphaya kwama-25.409 anamhlanje aphezulu kunokubhengeza ngakumbi ngaphambili. Ixabiso liphinde laphinde layila kwakhona i-50% yenqanaba lokuhambisa umgca (sl) oqinisekisa ukuphuma okuphezulu.
Ixabiso liyakhula emva kokuzinza ngaphezulu komgca ophakathi we-pitchfork (ml). Ngoku kuthengiswa ngentla komgca wokutyibilika ongaphakathi (sl) osebenze njengamandla oxhathiso. Umgca we-median ephezulu (uml) ubonwa njengeyona nto kujoliswe kuyo elandelayo kunye nomqobo.
Ukuqhawuka ngaphezulu komgca we-downtrend kwaye kwinqanaba le-50% yokubuyisela inokubangela ukukhula okukhulu.
tags isilivere, XAGUSD, XAGUSD. Uhlalutyo lobuGcisa
Ixabiso lesilivere: I-XAGUSD ixhasa ukuGxothwa kwe-Bias edlulileyo kwi-25 yeedola njenge-US Dollar ihlala icinezelwe
Ukuhlaziywa: 5 April 2021
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAGUSD-Epreli 5
Isinyithi esimhlophe sikwazile ukuqhubeka nokubuyela kwakhona kwi-23.78 yeedola ezisezantsi. Isilivere (i-XAGUSD) yakha isaphulelo sangoLwesihlanu ngaphezulu kwe- $ 25.00 njengoko idola yaseMelika ihlala icinezelekile emva kwamabango angenamsebenzi.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 27.50, $ 26.77, $ 26.00
Amanqanaba enkxaso: $ 24.50, 23.50, $ 21.89
Uhlalutyo lobuchwephesha kwitshathi yemihla ngemihla lubonisa ukuba iSilver (XAG) iyaqhubela phambili emva kokophula uphawu lwama- $ 25. Ukuba abathengi bafumana indawo engaphezulu kwelo nqanaba, umqobo olandelayo onamandla odlulileyo kwi-MA 13 unokuvavanywa. I-Index ye-Relative Strength Index (i-RSI) yemihla ngemihla ibambe kakuhle phantsi komgca ophakathi, iphakamisa ukuba umbono wokudityaniswa uhlala uhleli.
Nangona kunjalo, ikhefu elicacileyo le-MA 13 kwinqanaba le-25.25 leedola, elibandakanya umgca wokuxhathisa olandelayo kwinqanaba lama-26 leedola kuyafuneka ukuba iinkunzi zingene. Kufuneka kuqatshelwe ukuba umndilili wokuhamba wenqanaba le-13 le- $ 25.22 inqanaba linikezela ngokuchasana kwangoko isicatshulwa.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iXAGUSD yamva nje inokuthi ihlasele umphezulu ojikeleze inqanaba lama- $ 26 ngaphambi kokujolisa kwinqanaba le- $ 28.90 elisezantsi lokumelana. Nangona kunjalo, i-4-yeeyure zokumelana nomjelo wenqanaba kwinqanaba le-26.77 yeedola iya kucela umngeni kwiinkunzi, ikhefu eliza kuthi ngokukhawuleza likhokele ikhowuti ukuya kwinqanaba eliphezulu leedola ezingama-30.13.
Okwangoku, ikhefu elisezantsi lokuhamba okuphakathi kwe-5, kwinqanaba leedola ezingama-24.70 ngoku, liza kulanda amaxabiso ezinto zorhwebo kumgca wokuxhasa ishaneli, okwangoku zijikeleze inqanaba lama- $ 24.50. Imeko ekhethiweyo iya kuba yindawo ende engaphaya kwenqanaba le- $ 25.00 eneethagethi kwi- $ 26 kunye ne- $ 26.77 kumanqanaba okwandiswa.
Isilivere (i-XAGUSD) ikwiNdlela esecaleni, inokuthi iQale phezulu
Ukuhlaziywa: 14 Matshi 2021
Amanqanaba okuGxila aphambili: $ 30.00, $ 31.00, $ 32.00
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 24.00, $ 23.00, $ 22.00
Isilivere (XAGUSD) yexesha elide iTrend: Bullish
Isilivere (i-XAGUSD) ikwindlela esecaleni ukusukela ngoJanuwari 2021. Ixabiso lijongene nokwaliwa kwinqanaba le- $ 28.00. Iinkunzi zeenkomo ziphinde zaphinda zayiphinda kathathu into yokuxhathisa kodwa azange zikwazi ukukhawulezisa amandla ayo ngaphezulu kwayo. Ngalo lonke ixesha iinkunzi zeenkomo ziqhekeza ngaphezulu kwayo, ixabiso liza kubuyela kumda oboshwe kuluhlu. Okwangoku, imarike inyuka ngaphezulu kwe- $ 25.00 ephantsi.
XAGUSD-Itshathi yemihla ngemihla
Ixabiso lenyukele kwinqanaba le-45 ye-Relative Strength Index period 14. Ibonisa ukuba iSilver ikummandla wehlayo. Ixabiso liphule ngezantsi kwe-SMAs ebonisa ukuba uSliver uyawa. Ii-SMAs zitshibilika ngokuthe tye zibonisa ukuhamba ecaleni.
Isilivere (i-XAGUSD) phakathi kwexesha eliphakathi: I-Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iXAGUSD yenza intshukumo ephezulu. Ngo-Matshi 9 uptrend, ikhandlela elibuyiselwe umva lavavanya inqanaba lokuphinda kubuyiswe i-61.8% yeFibonacci. Ukubuyiselwa kwakhona kubonisa ukuba imakethi iya kunyuka iye kwinqanaba le-1.618 yeFibonacci okanye i-26.78 ephezulu yeedola.
I-XAGUSD-4 Itshathi yeYure
I-XAGUSD ingaphezulu kwe-25% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Ibonisa ukuba ixabiso likwindawo ekhulayo. Isilivere ikwi-crossover ekhulayo. Iintsuku ezingama-21 ze-SMA zinqumleza ngaphaya kweentsuku ezingama-50 ze-SMA zibonisa ukuba amaxabiso anokunyuka.
Imbonakalo ngokubanzi yeSilivere (XAGUSD)
IXAGUSD ibikukuhamba ecaleni. Iimarike ziqala phezulu emva kokuwa kwinqanaba lama- $ 25.00. Ngokuya kuhlalutyo lwesixhobo seFibonacci, le uptrend yangoku inokuthi ifikelele kwinqanaba eliphezulu leedola ezingama-26.78.
tags isilivere, Uhlalutyo Technical, XAGUSD